Dabeecadda iyo degaanka Jabuuti
(Turjumaad ku-meel-gaadh ah / Google)
Shimbiraha muhiimka ah ee Shimbiraha iyo Biyolojiyada ee loo aqoonsaday Jabuuti oo ka kooban 11 goobood oo daboolaya dhammaan noocyada habka ugu habboon ee dalka. Lix (6) oo ka mid ah ayaa sharci ahaan loo aqoonsaday meelo la ilaaliyo (wargeysyada sida goobaha dabiiciga ah iyo badda). IBAs waxaa ka mid ah laba (2) goobood oo kayar yaryar ah, oo ah meelaha kaliya ee ku yaalla dalka; (4) dhulka qulqulaya: hal (1) gudaha, laba (2) marin iyo hal (1) meel xeebeed), shan (5) semi-arid iyo goobo qulqulaya oo aan weli lagu dhawaaqin meelaha la ilaaliyo. Toddoba (7) oo keliya ayaa lagu qiimeeyaa Goobaha Shimbiraha ee Muhiimka ah ee Afrika iyo Jasiiradaha Aasaasiga ah. Eeg liiska shimbiraha muhiimka ah ee Jabuuti iyo Muuqaalka Biyolojiyada.
Banka Goob Cad
Buuralayda Goda / Kaynta Dhay
Gasiiradaha Muusha / Masqalli
Guarda tutti messaggi da adnature →